आफ्नो क्रोधलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ! | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७८ बैशाख ५, आईतवार १७:३२ गते
आज यो संसार क्रोधलाई आफ्नो काबुमा राख्न चाहन्छ । क्रोधलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ ?
रिस उठेपछि मानिसहरुको मुखबाट आफूले कहिल्यै भन्नै नचाहेको कुरा फुत्किन्छ । त्यसपछि यस्तो काम गर्न पुग्छन् जुन उनीहरु कहिल्यै गर्न चाहेकै हुँदैनन् । यसको अर्थ मानिसलाई रिस उठेपछि आफूले आफूलाई नै बिर्सिन्छ । त्यो त एउटा त्यस्तो समय हुन्छ जतिखेर मानिसले आफ्नो सन्तुलनलाई गुमाएको हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा केही बोल्नुभन्दा पहिला एक क्षण सोच्नु नै उत्तम हुन्छ ।
क्रोधलाई बुझ्ने हो भने क्रोधले कहिल्यै ‘आउँदै छु’ भनेर आउने पनि होइन । यदि आयो भने त आइहाल्यो ! जब ‘म क्रोधित भएको छु’ भन्ने थाहा हुन्छ तबसम्म त रिसले आफ्नो काम गरिसकेको हुन्छ । अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
त्यसको एउटा तरिका छ ! तपाईंँ आफ्नो घरमा चोर भित्र नआओस् भनेर के गर्नुहुन्छ ? त्यसका लागि व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ । आफ्नो घरको झ्याल–ढोका बन्द गर्नुहुन्छ, झ्यालमा जाली लगाउनुहुन्छ, ढोकामा छेस्किनी लगाउनुहुन्छ या बाहिर पर्खाल लगाउनुहुन्छ ! यी सबै व्यवस्थापन हाम्रो घरलाई सुरक्षित राख्नका लागि गरेका हुन्छौँ । यदि तपाईंँले आफ्नो जीवनमा दयाको पर्खाल लगाउनुभएन भने क्रोध त आफसे आफ आउनेछ ! अझ आनन्दरूपी जाली लगाउनुभएन भने त क्रोध आपैmँ आउँछ !
दया तपाईंँभित्र छ ! तर, दयाका बारेमा कसैले कुरा गर्दैन । दयालाई अघि सार्नुहोस् जसले गर्दा रिस उठ्यो भने पनि भित्र आउन दिँदैन ! क्रोधलाई हटाउने विधि सृष्टिकर्ताले हरेक मानिसका लागि तय गरिदिएका छन् । अज्ञानतालाई हटाउनका लागि ‘ज्ञान’ को आवश्यकता पर्दछ, क्रोधलाई हटाउन प्रेम, माया र दयाको आवश्यकता पर्दछ ।
क्रोध तपाईंँभित्रैबाट आउँछ अनि दया पनि तपाईंँभित्रबाटै उत्पन्न हुन्छ । प्रेम पनि तपाईंँभित्र छ अनि घृणा पनि तपाईंँभित्रै छ । यथार्थमा कुनै पनि यस्तो समय हुँदैन जतिखेर तपाईंँमा यी दुवैमध्ये कुनै एकको अभाव होओस् । तपाईं जहाँ जानुभए पनि, तपाईंले जे गर्नुभएको भए पनि यी दुवै कुराहरु तपाईंभित्र सदैव रहन्छन् । यद्यपि तपाईंंँ कुन चीजलाई अघि बढ्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।
हामीलाई त के लाग्छ भने यदि हामीले कोठामा छेस्किनी लगाइदियौँ भने हामी एक्लै हुन्छौँ । त्यसपछि कोही पनि आउन सक्दैन । तर, हामीलाई के थाहा छैन भने काम, क्रोध, मोह, लोभ यी सबै हामीसँगै आइसकेका छन् । हामीसँग ती कुरा पनि आइसकेका हुन्छन् जसले हामीलाई हानी पु¥याउँछन् तर ती चीज पनि आइसकेका हुन्छन् जसको उपस्थितिले हाम्रो भलाइ हुन्छ ।
तपाईं रिसाउँदाखेरि तपाईंको शरीरलाई नोक्सान हुन्छ । अनि, तपाईं खुशी हुनुहुन्छ भने तपाईंको शरीरमा कुनै नोक्सान हुँदैन । यदि तपाईंको शरीरलाई नोक्सान नहोओस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाईं क्रोधित हुनुको सट्टा प्रसन्न हुनु नै उत्तम हुन्छ ।
“आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्”– यो किन पनि आवश्यक छ भने तपाईंलाई दयाको भण्डार आपूmभित्रै छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ । यो कुरालाई बुझ्नका लागि तपाईंले स्वयम्लाई चिन्नु आवश्यक छ । जबसम्म यो कुरा बुझ्नुहुन्न तबसम्म मसँग के–के छन् ! मेरो औजार के हो भनेर थाहा हुँदैन !
यो समस्यालाई हल गर्नका लागि, यो युद्धमा लड्नका लागि मसँग पहिलादेखि नै के–के उपकरण छन् ? तथापि, मानिसहरु मसँग यो समस्यामाथि विजय हासिल गर्नका लागि केही पनि छैन भनेर पहिल्यै हार मान्छन् ।
तपाईंसँग लड्नका लागि ज्ञान छ । तपाईंसँग यो अँध्यारोलाई हटाउनका लागि तपाईंको हृदयमा प्रकाश पनि छ । तपाईंलाई जे–जे चाहिएको छ ती तपाईंभित्रै छन् । तर, यदि तपाईं आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्न भने त तपाईंलाई आफूसँग के–के छन् भनेर थाहा नै हुँदैन !
यदि तपाईं आफ्नो जीवनलाई थोरै भए पनि बदल्न चाहनुहुन्छ भने केवल तीन सेकेन्ड सोच्नुहोस् । काम गर्नुभन्दा पहिला केवल तीन सेकेन्ड सोच्नुहोस्– ‘म के गर्न लागिरहेको छु ।’ त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुहोस् । किनभने, क्रोध पनि तपाईंसँगै छ अनि क्षमा पनि तपाईंकै साथमा छ । तीन सेकेन्डमा तपाईं छान्न सक्नुहुन्छ– क्रोध चाहिन्छ कि क्षमा ! क्षमाले प्रेम ल्याउँछ । प्रेमले उज्यालो ल्याउँछ । उज्यालोले आनन्द ल्याउँछ, केवल तीन सेकेन्डमा ।
म त मानिसहरुसँग के भन्छु भने हामीसँग एउटा यस्तो पनि चीज छ– जो असल पनि छैन र खराब पनि छैन । यो भनेकै प्रकृति हो । सृष्टिकर्ताले यो नियम बनाएका छन् । यो नियम सबैमा लागू हुन्छ । यसमा धनी–गरिब, शिक्षित–अशिक्षितको विभेद छैन । यो सबैमाथि समान रूपले लागूु हुन्छ । मानिसको प्रकृति अर्थात् स्वभाव नै के हो भने यी चीजहरुकै बीचमा भएर पनि उसलाई ‘के प्राप्त भएको छ’ भन्ने नै थाहा छैन । जे प्राप्त भयो त्यसलाई पनि ऊ सकारात्मक रूपमा सोच्दैन– ‘मैले खराब चीज मात्र पाएँ, असल चीज त पाउनै सकिन’ भन्छ । किनभने, मानिसको स्वभाव नै यही हो । उसले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छ । ‘त्योसँग त्यस्तो के चीज छ जुन मसँग छैन ?’ अर्को व्यक्तिलाई हेरेर भन्छ । ऊ अरूसँगै दाँजिएर आफ्नो बारेमा अनुमान लगाउँछ– ‘त्यो मानिस मभन्दा धनी छ कि गरिब छ ?’ कार हुनेहरु आफ्नो कारमा बसेर अर्काको कारलाई हेर्छन् र तुलना गर्छन्– ‘त्यसको कार मेरोभन्दा राम्रो छ कि नराम्रो छ ?’ कारको कुरा छोडाँै । भाडा तिरेर बसमा यात्रा गर्नेहरु पनि यही कुरा दोहो¥याउँछन् । अर्को बस आफू चढेकोभन्दा राम्रो छ कि नराम्रो छ ?’ यद्यपि त्यो बस उसको पनि होइन । त्यसमा ऊ त यात्रा मात्र गरिरहेको हुन्छ । निश्चित गन्तव्यसम्मका लागि भाडा तिरेको हुन्छ । तर पनि, अर्को बसलाई हेर्दै तुलना गर्छ– ‘अरूहरु चढेको त्यो बस आफू चढेको बसभन्दा राम्रो छ कि नराम्रो ?’ मानिसहरुले एउटा महŒवपूर्ण कुरालाई सधैँ बिर्सिन्छन् । मानिसभित्रै एउटा यस्तो चीज छ, जो सबैका लागि समान छ । त्यो आइरहन्छ–गइरहन्छ । यो कुरामा मानिसको ध्यान कहिल्यै जाँदैन ।
अवसर आयो । अवसर प्राप्त भयो तर यसलाई बुझ्न सकेनौँ र यो हाम्रो हातबाट फुस्कियो । हाम्रो जीवनमा भएको वा हुनसक्ने कुनै ठूलो दुःखद् कुरा के हो भने जुन कुरा हामीलाई प्राप्त भइरहेको थियो, त्यही कुरालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ । कति मूल्यवान् चीज छ– यो श्वास ! सोच्नुहोस् त ! यस संसारमा तपाईं हिरा, मोती, जग्गा–जमिन धेरै चीजलाई किन्न सक्नुहुन्छ तर यो श्वासलाई किन्न सक्नुहुन्न ! यो कस्तो चीज हो ? तपाईं आपैmँ मनन गर्नुहोस् । तपाईं खाना बाँढ्न सक्नुहुन्छ, पानी बाँढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना लुगा–फाटा सारा भौतिक कुराहरु तपाईंले बाँढ्न सक्नुहुन्छ तर यो श्वासलाई बाँढ्न सक्नुहुन्न । यो जसको हो, त्यसैको मात्र हो । जोसँग छ, त्यसैको मात्र हुन्छ । यसलाई चोरले चोरेर लैजान सक्दैन । जबसम्म यो रहन्छ, तबसम्म तपाईं रहनुहुनेछ । जब यो हुँदैन तब तपाईं पनि रहनुहुने छैन ।
(यो लेख प्रेम रावतको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी साभार गरिएको हो । प्रेम रावत मानवता र शान्तिको विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
तनहुँ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट सुरु भएसँगै तनहुँका १० पालिकामध्ये सात पालिकाले १०० शय्या क्षमताको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेका...
सिएमसीमा जटिल कोरोना बिरामीको शय्या भरियो